Maraoka: Mifanakalo Hevitra Amin’ny Lova Napetraky ny Malalaka Fisaina Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2018 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Português, Français, Nederlands, Español, македонски, English
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny mey 2010)
Medersa avy amin'i Piero Sierra tao amin'ny Flickr
Voamarika kely tao amin'ny fampitam-baovao ny fahafatesan'ilay Maraokana filôzôfy sady mpanao teoria sosialy iray antsoina hoe Mohammed Abed al-Jabri. Nefa mifandraika indrindra amin'ny fotoana ankehitriny ny fandraisana anjaran'i al-Jabri manoloana ny fifandonan'ny rafi-pisainana (rationalité) sy ny fomba fisaina ara-pivavahana (pensée relisieuse). Betsaka ny teny fanomezan-kaja ilay lehilahy sy ny asany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, saingy raha nahazo fanajana mitosatosaka toy izany ny fahafatesan'ny iray amin'ireo Arabo manana fisainana liberaly indrindra tamin'ny fiandohan'io volana io, dia nivoaka avy amin'izany ihany koa ny miafina any amin'ny sangany arabo any, ny iray izay mampisara-kevitra indrindra eo amin'ireo malalaka fomba fisaina sy ireo mpandala ny nentim-paharazana. Hita ao amin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tranonkalam-pifandraisana fa misaraka ny hevitra ka misy ireo mihevitra fa nanampy tamin'ny fampihavanana ny fandrosoana maoderina sy ny fomban-drazana ny fomba fieritreritr'i Jabri, fa misy kosa ny mahita fa famelezana hafa atao amin'ny fahefana ara-pivavahana ny asan'ilay filôzôfy. Indreto ny sasantsasany amin'ireo fanehoan-kevitra ireo.
Abdeslam Ben Abdelali. Tamin'ny fanoratana tao amin'ny al-Awan, sehatra famahanam-bilaogy iray iresahana filôzôfia sy ny raharaha ankehitriny no nizaràny ny eritreriny [Ar] momba ilay filôzôfy farany :
[Nahafantatra i Al-Jabri] fa fotoana izao hamafazana ny voa. Saingy, tsy vita tsy misy fahalalàna ny fototra sy tsy misy fahaizana ara-tantara izany famafazana izany. Noho izany tsy maintsy misokatra amin'ny fomban-drazana isika; amin'ny karazam-pomban-drazana anankiroa: ny fomban-drazana Arabô-Islamika, sy ny fomban-drazan'ny zanak'olombelona (homanista). Saingy fantarontsika fa izay rehetra fandraisana ny vakoka homanista dia tsy maintsy ampandalovina amin'ny fomba fijerintsika manokana.
Mustafa Lemoueden izay mibilaogy ao amin'ny SidiSlimane.com manoratra hoe [Ar]:
Tsy nihemotra velively tamin'ny fironany na tamin'ny heviny i Al-Jabri, na dia teo aza ny karazam-pahasarotana sy sakatsakana rehetra, anisan'izany ny likiliky nateraky ny [asa-]sorany tamin'ny maro, fa nataony nisiratsiraka ny vakoka ara-kolontsaina iray manontolo. Nahatonga ireo mihevi-tena ho mpanoratra hamaly azy sy hitsipaka ny fehin-keviny ary ireo tsirin-kevitra mahavalalanina izany. Ny mampalahelo dia tonga hatramin'ny famoahana taratasy miantso ho amin'ny fandatsahana ny rany ny sasany amin'ireo vondron'olona.
Niraradraraka ny fanehoan-kevitra avy ao amin'ny faritra. Bilaogera Jordaniana i Mohammad Omar. Nanoratra izy [Ar] :
[Niaina] kodiaran-tsarety vetaveta aho, tao anatin'ny ranomody izay nihalohalo hatrany nitady valiny tamin'ny fanontaniana “tsotra” iray nivoaka 150 taona lasa izay tamin'ny “fanombohan'ny Fihavaozana Arabo,” ary mbola anontaniantsika isan'andro isan'andro hatramin'ny nisian'ny “faharesen'ny kolontsaina arabo” 50 taona lasa izay: nahoana no mandroso ny hafa raha tavela kosa isika?
Izany fanontaniana izany no toeram-piaingan'ny tetikasan'i al-Jabri hitsikera ny “Fisaina Arabo,” ary izany no fototry ny tsirin-keviny: “ny fibabohan'ny saina.”
Nanova tanteraka ny fomba fijeriko hatramin'ny fomba fiainako mihitsy aza ny nahitako voalohany ny asa-soratr'i al-Jabri. Tsy ilay tanora lahy izay zara raha mamaky na mitadidy ny lahatsoratra sasantsasany izay ho afa-po amin'ny fankamamiana fehezanteny na olona revolisionera sasantsasany intsony aho.
Al-Jabri no fanombohan'ny diako nankany amin'ny fisalasalana. Izy no fotoana nanokatra ny fahatongavan-tsaiko; fahazavan-tsaina.